ဖောက်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်သင်၏နည်းဗျူဟာကဘာလဲ။ | Martech Zone
အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 7, 2009 တနင်္လာနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 8, 2016 Douglas Karr
ပို့စ်များစွာတွင်ကျွန်ုပ်ပြောခဲ့ဖူးသည် “ ရယူ၊ ထိန်းသိမ်း၊ ကြီးပွားလော့” ကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်သူတို့၏စီးပွားရေးကိုကြီးထွားရန်မဟာဗျူဟာများ၊ ပြန်လည်ထူထောင် ဖောက်သည်များ ငါဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာ ၀ င်လာတဲ့အချိန်မှာဖောက်သည်တွေပြန်လာတာကိုတွေ့ရခဲပါတယ်။ ဒါကမလုပ်သင့်ဘူးလို့မဆိုလိုပါဘူး။
ကျွန်ုပ်သည် WebTrends Engage ကွန်ဖရင့်တွင်ပါဝင်ပြီး၊ CEO Yoder သည်မဟာဗျူဟာများကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးစတုတ္ထမဟာဗျူဟာအနေဖြင့်ပြန်လည်နာလန်ထူခဲ့သည်။ Radian6 နှင့်ပူးပေါင်းရန် WebTrends ၏ကြေငြာချက် ပြန်လည်နာလန်ထူရေးအတွက်ခိုင်မာသောမဟာဗျူဟာကိုထောက်ပြသည် - စားသုံးသူများပြောနေသည့်အရာကိုနားထောင်နိုင်ရုံသာမကအလုပ်များကို သတ်မှတ်၍ လူမှုမီဒီယာရင်းမြစ် (သြဇာလွှမ်းမိုးမှု) ကို ဦး စားပေးလုပ်ဆောင်ရန်လုပ်ဆောင်နိုင်သောလုပ်ငန်းအသွားအလာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျစရိတ်နည်းသောကမ္ဘာကြီးတွင်နေထိုင်ပြီးကုမ္ပဏီများသည်ဖောက်သည်အမြောက်အများကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူများစွာကိုစီမံခန့်ခွဲရန်အခက်အခဲရှိသည်။ ဤစနစ်များသည်သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်ထိရောက်စွာဆက်သွယ်ခြင်း၊ သင်၏ဂုဏ်သတင်းကိုစီမံခြင်းနှင့်အလားအလာရှာဖွေခြင်းတို့၏လိုအပ်သောနည်းလမ်းများဖြစ်သည်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ပေါင်းစပ်။ ၎င်းပလက်ဖောင်းများသည်ကုမ္ပဏီအား ၄ င်း၏ဂုဏ်သတင်းကိုအချိန်နှင့်တပြေးညီသိမြင်နိုင်ရုံသာမကစကားပြောဆိုမှုကိုချက်ချင်းတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်စားသုံးသူများနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိသည်။ စားသုံးသူများအနေဖြင့်ဒေါသထွက်နေသောဖောက်သည်ကိုမေ့ပျောက်သွားစေရန်အဆုံးမဲ့အချက်များဖြင့်နံပါတ် ၁-၈၀၀ နံပါတ်နောက်ကွယ်တွင်သာမဟုတ်ဘဲကုမ္ပဏီများကိုနားထောင်ရန်သူတို့၏ကွန်ယက်နှင့်ဆက်သွယ်မှုများကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။
နည်းစနစ်ကိုစမ်းသပ်ဖို့ငါ Tweet တင်ဆက်မှုကာလအတွင်း WebTrends အကြောင်းနှင့် WebTrends ၏ကိုယ်ပိုင် Jascha Kaykas-Wolff သည်ကျွန်ုပ်ကို Keynote တွင်ပရိသတ်နှင့်တွေ့ပြီးသူ၏ iPhone တွင် Twitter တွင်ဖော်ပြထားခြင်းကိုပြသခဲ့သည်။ သိပ်ကောင်းတဲ့အရာပဲ! WebTrends ကလည်း Open Exchange - သူတို့၏ပွင့်လင်းသောဒေတာပလက်ဖောင်းသည်ဖောက်သည်များအား API မှတစ်ဆင့်၎င်းတို့၏အချက်အလက်များကိုအခမဲ့ရယူခွင့်ပေးသည်။ သူတို့ထားသကဲ့သို့, “ ဒါကမင်းရဲ့ဒေတာပါ၊ မင်းဒါကိုမပေးသင့်ဘူး!” (အာမင်!) သူတို့ကသူတို့ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးကွန်ယက်ကိုစတင်ခဲ့သည်။
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များနှင့် ပတ်သက်၍ စုဆောင်းထားသည့်အချက်အလက်ပမာဏအနေနှင့်အချို့ကစိုးရိမ်နေကြသည်။ အဲလက်စ်သည်သူထံမှ ၀ ယ်ယူသည့်ကုမ္ပဏီများအနက်မှသူနှင့်ပတ်သက်သည့်ဒေတာ ၂၀၀၀ ကျော်ရှိသည်ဟုဖော်ပြခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီများအကြောင်းကျွန်ုပ်မည်မျှသိရှိကြောင်းကျွန်ုပ်စိတ်မ ၀ င်စားပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ထိုအချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်အားပိုမိုကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံရန်အသုံးမပြုသည်ကိုကျွန်ုပ် ပို၍ စိုးရိမ်မိပါသည်။
သင်ထွက်ခွာသွားသောဖောက်သည်များအတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးနည်းဗျူဟာရှိပါသလား။ သင်၏ကုန်ပစ္စည်း၊ သင်၏ကုမ္ပဏီစသည်တို့ကိုသိရှိထားပြီးဖြစ်သောတစ်စုံတစ် ဦး သည်ပြန်လည် ၀ ယ်ယူရန်အလွန်ကောင်းမွန်သောဖောက်သည်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသည်။ သို့သော်ဝယ်ယူသူအသစ်ကိုလုံးဝဝယ်ယူရန်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လျှင် Radian6 ၏သရုပ်ပြမှုကိုကြည့်ပြီးသင်၏ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောအမြင်ကိုကြည့်ချင်လိမ့်မည် analytics သင့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်မလားဆိုတာကိုဆုံးဖြတ်ဖို့ပေါင်းစည်းမှု။
Tags: Alex Yoderဖောက်သည်ပြန်လည်နာလန်ထူဖောက်သည် retentionJascha Kaykas-Wolff။ဖောက်သည်များပြန်အနိုင်ရ
VegT ၌ဤရက်သတ္တပတ် WebTrends တွင်ပါဝင်သည်
ဧပြီ 7, 2009 မှာ 3: 09 pm တွင်
ငါဖြစ်ရပ်မှာပါ ၀ င်စေချင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်အဓိကကျတဲ့အကြောင်းရင်းကိုအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြပြီး WebTrends / Radian6 မိတ်ဖက်ကြေငြာချက်အကြောင်းရေးသားခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
သင်ပြောသည့်အတိုင်း“ ၁-၈၀၀ နံပါတ်နောက်ကွယ်၌သာဖုံးကွယ်မထားပါနှင့်” ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုကိုတိုးတက်စေရန်နှင့်သူတို့၏ဖောက်သည်များပိုမိုနားထောင်ရန်ကုမ္ပဏီများကိုကြီးမားသည့်အခွင့်အလမ်းများပေးသောကုမ္ပဏီများကဲ့သို့ပင်သင်၏အမြင်ကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။
ဧပြီ 7, 2009 မှာ 3: 45 pm တွင်
Engage တွင်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အတူရှိနေခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ မင်းကမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲရေးခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပေမယ့်မင်းရဲ့ post ကဒီလိုမျိုးမျိုးကိုကိုယ်စားမပြုဘူး။
ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းလုပ်ငန်းအများစုကိုဆော့ဖ်ဝဲ / စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းနှင့်သုံးစွဲသူပြန်လည်ထူထောင်ရေးမဟာဗျူဟာသည်ရေရှည်အောင်မြင်မှုအတွက်အရေးကြီးသည်ဟုပြောပါလိမ့်မည်။ သင်ရောင်းချသည့်ကုန်ပစ္စည်းများမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေထိပ်တန်းအမှတ်တံဆိပ်၏အမှတ်အသားသည်တစ်ခုခုကိုကြောက်စရာကောင်းသည့်အခါဖောက်သည်များအားသူတို့ပြုမူဆက်ဆံပုံဖြစ်သည်။ ဆော့ဗ်ဝဲမှာလည်းငါတို့အတွက်ပါ။
မင်းရဲ့ပို့စ်မှာမင်းကိုငါရှာတွေ့ပြီးငါ့ရဲ့ iPhone မှာမင်းရဲ့ tweet ကိုပြခဲ့တယ်။ အသံကျယ်လွန်းလို့ကျွန်တော်ရှင်းပြတာကိုမရှင်းပြခဲ့ဘူး။ မင်းကိုငါပြခဲ့တဲ့အရာကငါကတဆင့်ငါ့ဆီကိုပို့မယ့်အချိန်မှန်သတိပေးမှုပဲ Radian6 အားဖြင့် powered Webtrends လူမှုတိုင်းတာခြင်း။ ယနေ့ကျွန်ုပ်အသင်းတွင်ဤကိရိယာကို သုံး၍ ၎င်းကိုနှစ်သက်သည်။ အဆိုပါ Radian6 အသင်းနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်ကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်၏။